EEG KALA HOREYNTA: Kooxda Arsenal ayaa hoggaanka u hayn lahayd horyaalka Premier League haddii… – Gool FM
EEG KALA HOREYNTA: Kooxda Arsenal ayaa hoggaanka u hayn lahayd horyaalka Premier League haddii…
Haaruun April 5, 2016
(London) 05 Abriil 2016 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa hoggaanka u hayn lahayd horyaalka Ingiriiska ee Premier League haddii kubbadaha birta ku dhacay ay shabaqa gali lahaayeen ama gool noqon lahaayeen.
Gunners ayaana hoggaanka horyaalka kaga qaban lahayd Leicester City farqiga goolasha taas oo ay wada yeelan lahaayeen min 59-dhibcood, waa haddii kubbadaha birta ku dhacay ay shabaqa gali lahaayeen ama gool noqon lahaayeen.
Sidoo kale kooxda West Ham ayaa kaalinta saddexaad soo gali lahayd, halka Manchester City ay dagi lahayd kaalinta afaraad, iyadoo leh 56-dhibcood.
Haddii kubbadaha birta ku dhacay ay shabaqa gali lahaayeen ama gool noqon lahaayeen kooxda Tottenham ayaa ka soo muuqan lahayd kaalinta 6-aad ee Premier League, iyadoo leh 52-dhibcood, halka Man United ay ku jiri lahayd kaalinta 7-aad iyadoo haysata 49-dhibcood.
Haddaba qaabkan ayey noqon lahayd kala sarreynta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan haddii kubbadaha birta ku dhacay ay shabaqa gali lahaayeen ama gool noqon lahaayeen:-
Wiilka soo baxay ee Anthony Martial oo markii ugu horreysay ka hadlay sheekada Jose Mourinho la xiriirineysa xilka Man United!